Iindaba -Iimilo ezithathu ezinamacala ashushu eSitampu soLawulo loMgangatho kunye neZiphene kunyango
Ukunyathela okushushu-ntathu kuyindibaniselwano yesiphumo sokucinezela i-bump kunye ne-stamping eshushu, ene-anti-fake kunye nefuthe lobugcisa, ngenxa yoko isetyenziswe ngokubanzi. Kodwa ulawulo lomgangatho wesitampu eshushu esimbaxa sesithathu yingxaki enobunzima. Eli phepha lichaza ngokufutshane imilinganiselo yokulawula isitampu eshushu eshushu eshushu kunye nokulungiswa kwesiphene, umxholo wesalathiso sabahlobo:
Umgangatho Wokunyathela okushushu-ntathu
Nika umdlalo opheleleyo kwiimpawu zezinto ezenziwe nge-anodised kunye neplate, ukwenzela ukuba izixhobo, izinto zokusebenza, indawo, ubushushu, uxinzelelo, isantya kunye nezinye izinto kunye nokuprinta phakathi kokubumba indibaniselwano elungileyo, ukuyilwa kwenkqubo efanelekileyo yokulinganisa, kwaye ekugqibeleni kuvelise imveliso eyanelisayo enemilinganiselo emithathu eshushu.
Xa kuthelekiswa ipleyiti bronzing eqhelekileyo kunye nembasa ipleyiti, inkqubo yemveliso ye-three-dimensional hot stamping plate isebenzisa indawo enye, kwaye kukho umahluko obonakalayo. Ngenxa yokuba ukunyathela okutshatshele-ntathu kukushushu isitampu esitshisayo okanye ucofe i-bump ukugqibezela inkqubo, ke inguqulelo eshushu yokunyathela kunemilinganiselo esemgangathweni eshushu yokuhombisa kunye ne-embossing yeepleyiti ziphezulu, iimfuno zokwenza iipleyiti zingqongqo ngakumbi, inkqubo inzima ngakumbi. Umzekelo, uguqulelo oluqhelekileyo lokuqaqamba kwesiphelo esisezantsi lucaba, akufuneki lwenziwe ngokukodwa, kunye nokunyathela okushushu okuthathu ngenxa yendlela yokwenza imilo emacala mathathu, ngoko ke uxinzelelo lwayo olushushu kakhulu emazantsi kufa kufuneka Yiba nohlobo olushushu oluhambelana ne-letterpress yokubumba eyindoda, oko kukuthi uxinzelelo olushushu kwinxalenye yekhefu emazantsi ekufeni kufuneka iphakanyiswe, kwaye ukuphakama kwamaqhuma kunye noxinzelelo olushushu kuyahambelana nohlobo lobunzulu bekhefu.
Umgangatho ophezulu wokunyathela isitya esishushu sisiseko esibalulekileyo sokuqinisekisa umgangatho weemveliso ezinyanzelayo ezishushu. Uhlobo olushushu lokucinezela kufuneka lwenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zentsimbi, ngokubanzi ezenziwe ngeplanga yobhedu ngokukrolwa kwelaser. Isinyithi engenasici nayo yimveliso yokunyathela okushushu kwezinto ezibalaseleyo, kuba umphezulu wayo ugudile kakhulu, xa kuthelekiswa nohlobo lobhedu, intsimbi eshushu engena shushu yokunyathela isicatshulwa esishushu sokuqaqamba kwenkcazo kunye nenkcazo iphezulu, isiphumo se-concave kunye ne-convex Uxinzelelo lungcono.
Ngenxa yokuba uhlobo olushushu lokucinezela luqhutywa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu, iziphene ezincinci ezingacacanga phantsi kweemeko eziqhelekileyo zinokuba nefuthe elikhulu kumgangatho wemveliso. Ke ngoko, kuhlobo olushushu lokucinezela ulawulo lomgangatho kufuneka silwele ukugqwesa, ukuze kupheliswe inkathazo esemgangathweni efihliweyo evela kumthombo.
Ngokubanzi, ingxelo etshisayo eshushu kufuneka ibe nobungqingqwa obufanayo, iphethini, umbhalo ocacileyo ocacileyo, ubunzulu obungaguquguqukiyo; Ezantsi die kufuneka tyaba ngaphandle imikrwelo, ubungakanani obufanayo, akukho nokuqhekeka, egcwele ubulukhuni; Uhlobo olushushu lokucinezela kunye ne-bottom die ayinakubonakala kwi-deformation eye deformation, ukuwa, i-bubbles, i-burrs kunye nezinye iziphene.
Umgangatho we-anodized ngokuthe ngqo umisela ukuvela kweemveliso ezintathu zokunyathela ezishushu. Umgangatho ofanelekileyo wealuminium anodized kufuneka ungabinamabala aqaqambileyo, amabala amnyama okanye umsonto weplate ye-laser, umphezulu wokukhusela umphezulu ugudile kwaye ubonakale, akukho nto inkungu nengwevu. Xa ukuhlolwa kokukhanya kwe-anodised, akufuneki kubekho mabala amhlophe abonakalayo, amabala amdaka, amabala e-glue, imingxunya yesanti kunye nezinye iziphene ezisemgangathweni.
Ukongeza kwintsebenzo yokubonakala, intsebenzo efanelekileyo eshushu yealuminium oxide nayo ibaluleke kakhulu. Le yenye yezinto ezithatha isigqibo sokuchaphazela umgangatho wesitampu esishushu, kunye nokunamathela kwayo, amandla okuxobuka kunye nokuchasana nefuthe kumiselwe ngokuthe ngqo kukusebenza kokunyathela okushushu. Ukuqinisekisa ukuba i-aluminium efanelekileyo ye-electrochemical ingabonisa ukusebenza okusemgangathweni, kungekuphela nje kufuneka ukhethe ngokucophelela iphepha, i-inki, ioli elula, iingubo zeekhemikhali, ezifana ne-varnish nazo zijongana nenkqubo yokutshiza iiparameter ezifana nobushushu, isivinini, uxinzelelo lokuseta ngokufanelekileyo , Kuya kufuneka uzame ukushushu ngaphambi kwemveliso emininzi, ukuze kuqinisekiswe isivuno xa imveliso yobunzima.
Ukongeza ekuqinisekiseni iipropathi zoku-ayina ezifanelekileyo ze-aluminium eyenziwe nge-ironing, izixhobo ezikhethekileyo okanye iteyiphu kufuneka isetyenziselwe ukuvavanya amandla e-peel, ukumelana nefuthe kunye nezinye iipropathi zealuminiyam edityanisiweyo. Ukuba amandla e-peel e-aluminium ene-anodised mncinci kakhulu, kwinkqubo yokuhambisa isitampu eshushu inokubonakala ngathi ilahla i-aluminium okanye idlulise iingxaki ezimbi; Ngokuchasene noko, i-anodised kunzima ukuyidlulisa ngokupheleleyo, ukunyathela okushushu akubonakali kwimpazamo esemgangathweni. Ukuba uxhathiso lwempembelelo ye-anodize luhlwempuzekile, ingxaki yokuwisa i-aluminium iya kwenzeka kwinkqubo yokucinezela i-concave kunye ne-convex, kwaye ukusebenza kwemveliso egqityiweyo yinxalenye engaphelelanga neyonakeleyo yokutshisa. Ke ngoko, inyathelo lokuqala lokusombulula inkqubo yokunyathela-ntathu ye-aluminium, engagqitywanga, enegwebu, ukwahlulwa komaleko kunye nezinye iziphene ezisemgangathweni kukuziqonda ngokupheleleyo iipropathi ezahlukeneyo zealuminium anodized. Kwimveliso yokunyathela okushushu-ntathu kwiphakheji yecuba, iholographic aluminium anodized aluminium eneqondo lobushushu eliphezulu kunye nokuchasana nomgunyathi kukhethwe ngokubanzi. Olu hlobo lwe-aluminium ene-anodized inamandla amahle e-peel kunye nokuchasana nefuthe, akukho lula ukuyiguqula, kwaye ilungele ukusebenza kwesitampu eshushu, ngenxa yoko inokuqinisekisa ngokufanelekileyo umgangatho weemveliso ezigqityiweyo.
Ukongeza, ekubekeni indawo-ntathu eshushu isitampu esine-anodized ipleyiti umgama kufuneka ungqinelane, awunakugqitha kwiseti yempazamo yempazamo (impazamo <0.1mm). Ngenxa yokuba kusisitampu eshushu sokubala, umgama wepleyiti njengendawo yokujonga iliso le-laser, nokuba kukho impazamo encinci, emva kokucinezela okuninzi okushushu, impazamo eyonyukayo iya kumangalisa, ngamanye amaxesha ide ifike kumashumi eesentimitha, ibangele Inkunkuma eninzi yezinto, ke umgama weplati ye-anodized kufuneka ulawulwe ngokungqongqo.
Kwinkqubo yemveliso yokunyathela eshushu-ntathu, ukusuka "kushushu" kunye "noxinzelelo" kwimiba emibini yolawulo lomgangatho, ukunqanda ukubambelela okungalunganga, i-inki yokutsala umva, ukunyathela okushushu asizizo iziphene ezikumgangatho ophezulu; Ukolula i-aluminium oxide yokuncamathela kushushu ukunyibilika kunye ne-inki, i-varnish, i-varnish phakathi kobudlelwane obusondeleyo; Kufuneka kwakhona ukuba usete iindawo zolawulo lomgangatho kumatshini wokushicilela, nikela ingqalelo enkulu kwisixa se-inki, isomisi se-inki, isixa sokutshiza umgubo kwinkqubo eshushu yokucinezela, kunye nolawulo olungqongqo, ukusombulula kwangexesha iingxaki zomgangatho.
Ukulawulwa kobushushu njengendawo ephambili yokulawula isitampu eshushu eshushu eshushu, ulawulo olungqongqo lwexesha lokushushubeza, kunye nokuqinisekisa ukuba amaqondo obushushu anyuka, uluhlu lokuwa kunye nesantya eshushu sokunyathela ukugcina ungqamaniso. Isixa sokufakwa kwencindi yokunyibilikisa eshushu sincinci sincinci kakhulu, ke ukuba ifumana ukuphambuka okuncinci kubushushu obushisayo, iya kuchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho wokudluliswa kwealuminium. Ukongeza, ukutyabeka umphezulu wensimbi yentsimbi yealuminium nayo icekeceke (ubukhulu yi-1 ~ 2μm kuphela), kwaye inovakalelo olukhulu kutshintsho lobushushu, ke kufuneka silawule ngononophelo ubushushu bokunyathela.
Kodwa umgaqo wobushushu akukho lula ukuwulawula, ke ngoko kwinkqubo yokwenyani yemveliso, rhoqo ngenxa yokutshintsha kwesitampu eshushu kunye nezinye iingxaki zomgangatho. Umzekelo, ubushushu obushushu bokunyathela buphantsi kakhulu, ukunyibilikiswa kwesinyibilikisi esinyibilikisiweyo asonelanga, kuyenzeka ukuba ungatshisi ungagqitywanga, uncamathele kuguqulelo, ukunyathela okushushu, iinwele kunye nezinye iziphene zomgangatho; Xa ubushushu bokunyathela bushushu buphezulu kakhulu, umphezulu we-aluminium yodweliso uyanyibilika, kuya kubakho ukubonwa, kodwa kuphinde kuvelise umbala, inkungu yomphezulu, akukho gloss laser kunye nezinye iziphene ezisemgangathweni. Ukongeza, igwebu, i-aluminium, i-peeling kunye nezinye iziphene kunye nolawulo olushushu lokunyathela ubushushu lunobudlelwane obukhulu, umvelisi kufuneka esekwe kwintsebenzo ethile yomgangatho wesiphoso ukulungisa ubushushu bokunyathela.
Ukuze wenze iimveliso zestamping eshushu-ntathu kunye noxinzelelo olulula kunye nemveliso ye-convex yesiphumo se-concave kunye ne-convex efanayo, kuyafuneka ukuba kuqinisekiswe isiphumo sokunyathela eshushu ngaxeshanye, umgangatho wolawulo lwe-concave kunye noxinzelelo loxinzelelo. Kuba ukunyathela okushushu-ntathu kugqityiwe ngaxeshanye kwaye ucinezele inkqubo ye-concave kunye ne-convex, ubungakanani boxinzelelo aluchaphazeli kuphela ukunamathela kwe-anodide, kodwa ikwanxulumene nefuthe le-concave kunye ne-convex, ngamanye amaxesha kunokubakho ukungangqinelani okungahambelaniyo phakathi Mbini. Umzekelo, uxinzelelo olubekiweyo lukhulu kancinci, unokonyusa ukunamathela kwe-anodization ephepheni, ulungele ukunyathela okushushu, kodwa kwinkqubo yokushicilela i-concave kunye nomonakalo wephepha elinokuvela.
Ke ngoko, ukuze kufezekiswe eyona nto ishushu yokunyathela ngesiseko sokungaphuli iphepha, kufuneka usete ngononophelo uxinzelelo, kwaye uhlengahlengise ngokufanelekileyo ukuphakama kwesakhiwo sokucinezela esishushu, ulungelelwaniso oluchanekileyo lwe-concave kunye ne-convex bottom die, to Qinisekisa ukuba yonke inguqulelo eshushu yokucinezela kunye nokufa okuphantsi, tyaba ziyahambelana. Ukongeza, kodwa ukujonga umgangatho wokulandela umkhondo wezantsi, ngakumbi kwi-die esezantsi kuye kwafikelelwa kumashumi amawaka amaxesha oxhathiso lwempembelelo, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ukujonga isidanga sokuqina kunye nobungqongqo bezantsi, kunye nokutshintshwa kwangexesha kwezinto ezisezantsi ezigugileyo
Kwinkqubo yemveliso yokunyathela okushushu-ntathu, iziphene ezisemgangathweni zinokwenzeka nangaliphi na ixesha, kwaye kufuneka kujongwane nazo kwangexesha. Phakathi kwazo, kunye nokuqina kwe-inki edityaniswe ngokusondeleyo kunxulumene neziphene eziphambili kubandakanya ukubambelela nge-anodized, i-inki yokutsala umva, ukunyathela okushushu, i-aluminium engaphelelanga njalo njalo.
Kwinkqubo yemveliso yokunyathela eshushu-ntathu, ukusilela kokunamathela kwe-anodized kuhlala kuboniswa kwezi zinto zimbini zilandelayo, izizathu zahlukile.
Enye into kukuba i-aluminium ene-anodized ayinakunamatheliswa ngokuqinileyo kumphezulu wokuprinta, kwaye inokuba ishushu kakhulu, kwaye imeko yealuminiyam okanye ukungapheleli okukhulu kuya kuvela xa itheyiphu itsaliwe. Kuhlalutyo lokugqibela, oku kungenxa yokunamathela okungalunganga kwealuminium anodized, ngeli xesha isidingo sokuphucula ukusebenza okufanelekileyo okushushu kwealuminium anodised, okanye ukubuyisela ialuminium entsha.
Esinye isitampu esishushu emva kokuba ialuminiyam ene-anodized inokuncamatheliswa ngokuqinileyo kumphezulu wokuprinta, kodwa kuyakubakho inki yokubuyisa umva. Le nto ibangelwa kukuncamathela kwe-inki, kunye ne-inki kunye nokushicilelwa kwephepha kunye nokuma kwe-inki akuhambelani ngokupheleleyo nezinye izinto, ngeli xesha, kufuneka siphucule i-inki yokuprinta kunye nokuziqhelanisa nephepha, okanye uhlengahlengise inqanaba lokomisa inki .
Ukunyathela okushushu kushushu
Ezona zizathu ziphambili zokunyathela isitampu eshushu zezi zilandelayo: enye ye powder eninzi kakhulu kumgangatho wokuprinta, esona sizathu siqhelekileyo; Ezimbini i-inki ayomile ngokupheleleyo kwisitampu eshushu; Okwesithathu, umphezulu womaleko we-inki wothanjiswe nge-varnish yokhuselo, i-varnish kunye nezinye izinto zokucoca i-resin, ukuze ungabinakho "ukudibana". Ukudibana nesitampu eshushu hayi kwiingxaki ezisemgangathweni, kufuneka siqhubeke ukusuka kwinyani, iingxaki ezithile kuhlalutyo oluthile, musa ukukhawulezisa ukunyathela okushushu, ukunqanda ukuveliswa kobuninzi beengozi zenkunkuma esemgangathweni.